၃ သိန်းတန်ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် realme 5s ကို ရွေးချယ်သင့်လား?
realme 5s? ၂၀၁၉ ထဲမှာ realme5စီးရီး ၄ မျိုးလောက် မိတ်ဆက်ခဲ့တာ စာဖတ်သူတွေ သိထားနှင့်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ဒီမော်ဒယ်တွေက ဘာကွာလဲ ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ စျေးကွာပါတယ်၊ realme5နဲ့ 5i က ကိန်းဂဏန်းအရပြောရရင် ၁ သောင်း လောက်ပဲ ကွာတယ်။
ဒါပေမယ့် 5s က ၃ သိန်းလောက်နဲ့ ထွက်လာတဲ့အခါ အပေါ်က5Pro နဲ့ စျေးကခပ်လှမ်းလှမ်း ဖြစ်နေပါပြီ။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ တကယ် Confused ဖြစ်စေပါတယ်။ မော်ဒယ် ၄ မျိုး ရှိတဲ့အထဲကိုမှ Specs ကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်၊5နဲ့ 5i က စျေးမတိမ်းမယိမ်း ဒီလိုပဲ 5s နဲ့5Pro လည်း Margin လို သဘောမျိုးဖြစ်နေတော့ ပေးရတဲ့စျေးနဲ့ တန်ရဲ့လား ခေါင်းစဥ်အောက်မှာ ကင်မရာပိုင်းကိုပဲ Focus ထားပြီး ဆွေးနွေးကြည့်တာပေါ့။
Personally အရဆိုရင်တော့ realme5စီးရီးတွေအကုန်လုံး တမျိုးတဲထွက်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ နောက်ဘက် Plastic Body က တပြောင်ပြောင်နဲ့ ကြည့်လို့တော့ ကောင်းတယ်၊ ဒါမယ့် လက်ဗွေရာ ထင်လွယ်တယ်။
ပါဝါခလုတ် ၊ Volume Control နဲ့ Fingerprint Sensor ဒီ ၃ ခု Alignment ကို လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ ကိုင်လို့၊ ထိလို့လွယ်အောင် လုပ်ပေးထားတော့ သုံးရအဆင်ပြေတယ်။
လုံးဝန်းနေတဲ့ Body အနားသတ်ဒီဇိုင်းက Budget ဖုန်းဖြစ်နေပေမယ့်လည်း Neat ဖြစ်တယ်၊ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အမြင်ပိုင်းအနေထားမှာ လက်ခံရလောက်တဲ့အထိ ကျေနပ်စရာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သာမန်ထက် မသိမသာလေး ပိုထူနေတဲ့ ကိုယ်ထည်က ကိုင်လိုက်တာနဲ့ Heavy မဖြစ်ရင်တောင် လက်ထဲပြည့်သွားတယ်။ ထူတယ်လို့ ပြောနေတဲ့ ခံစားချက်မျိုးရတယ်။
ပိုသိသာနေတဲ့အချက်က realme5ဖုန်းတွေအကုန်လုံး ကင်မရာ အပြင်ထွက်နေတဲ့ အချက်ကပါ။ လိုတာထက်ကို ပိုနေတဲ့အတွက် ဖုန်းကိုချထားလိုက်မယ်ဆိုရင် Balanced မဖြစ်ဘူး၊ ဒါမယ့် ဒီအချက်ကိုတော့ လက်ခံပေးလို့ရပါတယ်။
ကယ်..ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် အရေးကြီးဆုံး Display ကို ကျနော်တို့ ဆက်ပြောကြည့်တာပေ့ါ။ အရေးကြီးဆုံးလို့ Mention လိုက်ရတာက ဖုန်းနဲ့စာဖတ်တယ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်၊ ဂိမ်းကစားတယ်။ ဒီအလုပ်တွေက နေ့တဓူဝလုပ်နေတာဆိုတော့ နံပတ် ၁ အဖြစ် ရွေးချယ်လိုက်တာပါ။
နောက်တစ်ချက် ကျနော်ပြောချင်တာ realme5Pro ကလွဲလို့5၊ 5i နဲ့ 5s တွေက Display တစ်ပုံတစံထဲဖြစ်ပါတယ်။ 6.5″ IPS Panel မှာ 720 x 1600p Resolution သုံးထားတယ်၊ Waterdrop Notch ကိုပဲ ပွဲထုတ်ထားတဲ့အတွက် မျက်နှာပြင်ကျယ်ကျယ် ကြည့်ချင်သူတွေအတွက် အိုကေတယ်။
720p က 6.5″ တွက် နိမ့်နေလားဆိုတော့၊ မနိမ့်ဘူး။ သုံးထားတဲ့ SoC နဲ့ တွက်ကြည့်လိုက်ရင် Overweight ဖြစ်မနေဘူး။
ဂိမ်းကစားမယ့် လူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ 720p က Optimize ဖြစ်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာနဲ့ Facebook ပွတ်တာလောက်ပဲဆိုရင် ကျနော်ပြောသလို သုံးပျော်တယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ရဲ့လားဆိုတာကို နောက် Section သွားရင်းနဲ့ စဥ်းစားကြည့်တာပေါ့။
Snapdragon 665 က ဒီဖက်ခေတ်မှာ မျိုးမတုံးသေးဘူး။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဂိမ်းကစားဖို့အတွက် Powerful ဖြစ်သေးတဲ့ Chip ဆိုတော့ Budget ဖုန်းတွေအတွက် သင့်တော်တယ်။ 4GB RAM နဲ့ 64GB Storage သုံးထားတဲ့အတွက် မိုက်တယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်သုံးကြည့်ရသလောက် Day-to-day အတွက် Fine တယ်။ တစ်ခါတလေ သုံးနေရင်း ထွက်သွားတာမျိုး Noti Bar ဆွဲချလိုက်ရင် အထစ်ငေါ့ရှိနေတာမျိုး ကြုံရသေးပေမယ့် ခါတိုင်းထက် အကြိမ်ရေ နည်းလာတယ်။
ကျနော့်အထင် အသွင်ပြောင်းလာတဲ့ Software Optimization က အခုအချက်တွေပေါ် Effective ဖြစ်တယ်လို့ တွေးမိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မကြိုက်တာ ဘယ်လိုမှ Disable လုပ်မရတဲ့ တရုတ် App တွေ သုံးထားသလို အရံအနေနဲ့ ထည့်ထားတဲ့ App Market ၊ Browser တွေက တကယ့် Gimmick တွေပါ။ မသုံးချင်လို့ သွားပိတ်မယ်ဆိုရင်လည်း User Level ထည့်မထားတဲ့အတွက် ရှောင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
ကယ်..ဒီကောင်ံ့ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး The Most Important အပိုင်းပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း သိပ်များများစားစား မပြောတဲ့အတွက် လိုရင်းတိုရှင်းပဲ သွားပါမယ်။
realme 5s ၃ သိန်းအထိ တန်ဖိုးမြင့်သွားရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အကြောင်းပြချက်က 48MP အတိကျ ပြောရရင် Samsung ရဲ့ ISOCELL Bright GM1 Sensor ထည့်လိုက်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ 8MP (Ultra-wide) ၊ 2MP (Depth Sensor) နဲ့ 2MP (Macro Lens) သုံးထားတာ အတူတူဖြစ်ပေမယ့် Main Sensor နေရာမှာ 12MP နဲ့ 48MP ကွာသွားတယ်။
စမ်းကြည့်ရသလောက်ဆိုရင် Detail ပုံမှန်လောက်နဲ့ ရိုက်နိုင်တယ်၊ Lighting ကောင်းရင်ကောင်းသလို Quality ကောင်းမယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ဒီကောင့်ရဲ့ Main Sensor နဲ့ Landscape ၊ Beauty Shot အလှပတွေ သေချာရိုက်နိုင်တယ်၊ Pro Mode ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် ဝါသနာပါသူတွေအတွက် အဆင်ပြေတယ်။
48MP Camera Sample
ဒါပေမယ့် Samsung Sensor ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပုံမှန်ထက် Color ပိုများပြီး Indoor ရိုက်မယ်ဆိုရင် Noise ပါလာတယ်။
Main Sensor Sample
Ultra-wide အတွက်သုံးထားတဲ့ 8MP Sensor ကရော ဘယ်လိုနေလဲ? ကျွန်တော့်အမြင်ရ ပြောရရင် လိုသေးတယ်လို့ပဲ ကောက်ချက်ချချင်ပါတယ်။
5 ၊ 5i တွေနဲ့ ထူးမခြားနား Sensor သုံးထားပေမယ့် မြင်ရတဲ့အတိုင်း Wide-angle မှာ Nosie ထတာတပိုင်း၊ အရောင်မမှန်ဖြစ်တာတပိုင်း Lens Distortion ဖြစ်တာ လက်ခံရပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ Wide Shot အားကိုးလို့ မရဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
နောက် Depth Sensor နဲ့ Macro အတွက် သုံးထားတဲ့ Sensors တွေကရော ဘယ်လိုရှိနေမလဲ? ဒီအပိုင်းမှာတော့ Neutral ဖြစ်တယ်၊ ဆိုးတယ်လည်း မဟုတ်သလို ကောင်းတဲ့ထဲမပါဘူး။
အဓိက ပြဿနာဖြစ်နေတာ Software လိုအပ်ချက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် စီးရီးသစ်တွေမှာ ပိုကောင်းလာမယ် ထင်ပါတယ်။
အဲ့တော့ Display နဲ့ Performance ခဏဖယ်ထားလိုက်ပြီး 48MP ကင်မရာ ပြောင်းသုံးလိုက်တဲ့ 5s ကို အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် စျေးတစ်ချက်ပဲ ကျွန်တော်တို့ ပြောစရာ ဖြစ်နေတယ်။
Mid-range တန်းဝင် စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ပေးချင်ပေမယ့် Budget မကျ၊ တကျ အနေထားလေးမှာ 5s ကို ဝယ်သင့်သလား? ဒါမှမဟုတ် ၃ သောင်းလောက် ပိုသုံးလိုက်ရင်5Pro ကိုပဲ ရွေးရမလား?
ကျနော်သာဆို5Pro ရွေးမိမှာ သေချာပါတယ်။ ဘာလို့လဲ? အဖြေကရှင်းပါတယ်။
ကင်မရာတစ်လုံးထဲအတွက် 48MP မကြည့်ဘူးဆိုရင်5နဲ့ 5i ကိုပဲ ဝယ်လိုက်၊ ပိုကောင်းတာလိုချင်ရင်5Pro ကိုသွား၊ Budget မနိုင်ရင် 5s မှာနေ ဒီလို Confused ဖြစ်စရာ အချက်တွေ ရှိနေလို့ Recommend ပေးရခက်စေပါတယ်။
ဒီစျေးဒီတန်ဖိုးနဲ့ တွက်ကြည့်ပြန်ရင်လည်း 5s က သူ့အထာနဲ့သူ ဟုတ်နေတယ်၊ ကြားထဲမှာ ဝိဝေသကွဲသွားတာ ၃ မျိုးလောက် ကွဲနေတဲ့ realme5(၂၁၉,၀၀၀ ကျပ်) ၊ 5i (၂၂၉,၀၀၀ ကျပ်) ၊ 5s (၂၉၉,၉၀၀ ကျပ်) နဲ့5Pro ( ၃၃၉,၉၀၀) ကို
စာဖတ်သူတွေ မြင်သာအောင် ဖုန်း ၄ မျိုးရဲ့ Hardware Specs ကိုလည်း အကျဥ်းဖော်ပြထားပါတယ်။
Specificiation realme5realme 5i realme 5s realme5Pro
Display 6.5″ IPS LCD (Waterdrop Notch) 20:9 6.3″ IPS LCD (Waterdrop Notch) 20:9
Resolution 720 x 1600 (269 ppi) 1080 x 2400 (409 ppi)
Rear Cameras 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF
2 MP, f/2.4, (depth) 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF
2 MP, f/2.4, (depth) 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF
Front Camera 13MP f/2.0 8MP f/2.0 13MP f/2.0 16MP f/2.0
Battery 5,000 mAh Battery with 10W Charging 4,035 mAh Battery with VOOC 3.0
Table Data Reference: GSMArena
ဒီတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Finally ပြောချင်တာ realme 5s ဟာ နောင်တော်၊ ညီတော်တွေလို စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းတာမှန်ပေမယ့် Price to Performance အရ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ များနေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကင်မရာပိုင်းမှာ5Pro နဲ့အတူတူနီးပါး၊ ဒါပေမယ့် ၃ သိန်းအောက်မှန်းထားရင် realme 5s ကို စဥ်းစားချင် စဥ်းစားနိုင်ပါတယ်။
realme Homepage (India)
GS65 9SD ကို 1080p Solid Performer လို့ ပြောနိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ? အားနည်းချက်ကရော ဘာတွေလဲ?